Yohane 8 NA-TWI - Ɔbea guamanfo no - Yesu san kɔɔ - Bible Gateway
Yohane 7Yohane 9
Yohane 8 Nkwa Asem (NA-TWI)
8 Yesu san kɔɔ Bepɔw a Ngo dua pii wɔ so no so. 2 Ade kyee anɔpa no, ɔsan baa asɔrefi. Nnipa bebree baa ne nkyɛn ma ofitii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn. 3 Ogu so rekasa no, Yudafo mpanyin ne Farisifo de ɔbea bi a wɔkyeree no sɛ ɔrebɔ aguaman baa n’anim. 4 Wɔka kyerɛɛ Yesu se, “Kyerɛkyerɛfo, yɛkyeree ɔbea yi sɛ ɔrebɔ aguaman, 5 nanso Mose mmara hyɛ yɛn sɛ, ɔbea biara a wɔbɛkyere no saa kwan no so no, ɛsɛ sɛ wosiw no abo. Dɛn na woka wɔ ho?”